အမျိုးသားဆိုင်ရာ Archives - Myanmar Express
လူပျို စစ်၊မစစ် သိနိုင်မည့် အခြေခံ လက္ခဏာ ၅ချက်
ဒီပို့စ်ကတော့ အမျိုးသား တစ်ချို့ကို မျက်ခုံးလှုပ်စေတော့မှာ သေချာပါတယ်။ မှန်နေတဲ့သူတွေကတော့ အေးဆေးပေ့ါဗျာ 😛ယနေ့လို တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ
ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင် မုတ်ဆိတ်မွှေးကိစ္စက စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။ မုတ်ဆိတ်မွှေးထားမယ်ဆိုရင် ထိန်းသိမ်းရတဲ့တာက ထင်သလောက်လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မိန်းခလေးများ သိထားသင့်သည့် Sex Chat အန္တရာယ်
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ရင်ဖတ်ချင်မှလဲဖတ်ပါ မဖတ်ချင်လဲ မဖတ်ပါနဲ့။အခုနောက်ပိုင်း ကြီးမှန်းမသိကြီးလာတဲ့ ပြသနာတွေထဲ Sex Chat လဲပါတယ်။
Centrum ဆင်ထရမ်က ဗီတာမင်တွေက စိတ်ချရသလားဆိုတာအရင်ဖတ်ပါတယ်။ လူတွေ အဲလို ဆင်ထရမ်ကထုတ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေထဲမှာ တခြားဟာတွေပါနေလို့ တချို့လူတွေအတွက် စိတ်ချရသလားဆန်းစစ်တယ်။ တခုကတော့ ခဲဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာကြောင့် FDA ကနေ ခဲဓာတ်ပါဝင်မှုကို လေ့လာတော့ လူတွေအတွက် အန္တရာယ်ပေးနိုင်ချေအောက်မှာရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အလာဂျီရစေတာများတဲ့ Shellfish ငါးလည်း မပါဝင်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေ မသင့်ပါလို့ Centrum ဝဘ်ဆိုက်မှာရေးထားပြီးဖြစ်တယ်။ ဗီတာမင်အေ 800 micrograms ပါနေတာဟာ စိတ်ချရတယ်။ များရင်သာ အထဲကကလေးအတွက် မကောင်းပါ။ ဆရာဝန်အညွှန်း ဆေးပုလင်းအညွှန်းထက် မကျော်ရင် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
၁။ အစားအသောက်ကို ရွေးချယ်ဂရုစိုက်စားသုံးပါ။ အထူးသဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေသော အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်စားသုံးပါ ။ အသီးအနှံ ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ အသားငါး၊အစေ့အဆန် ၊ ဝိုင်နီ စသည်တို့ကို ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပြီး အဆီများသော အစားအစာ ၊ fast food တို့ကို ရှောင်သင့်ပါသည် ။
အမျိုးသမီးများ သတိထားနိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့သူတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ယောက်ျားပိုင်းလုံးတွေအကြောင်း
နောက်တော့ဆရာဝန်မလေးက live လွှင့်ပြီး အကြောင်းစုံဖွင့်ချလို့ အဲဒီကောင်အကြောင်း ဗူးပေါ်သလို ပေါ်လာမှ ဖုန်းဖိုးငွေတွေ ပြန်ပေးပါတယ်။ အဲဒီကောင်ဟာ ကျွန်မအကောင့်မှာပါ လာအက်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
ချိုင်းမွေး ခဏခဏ နုတ်ရတာအဆင်မပြေလို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
သကြား ၂ ခွက်
သံပုယိုရည် ခွက် ၁/၄ ပုံ
ရေခွက် ၁/၄ ပုံ
ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ အသုံးပြုခြင်းအိုးအသေးတစ်လုံးထဲကို ရေထည့်လိုက်ပြီး ဆူအောင်သည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် တခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီး သေချာမွှေလိုက်ပါ။
အောင်မြင်ဖို့ လက်တွဲဖော်( ရည်းစား )လိုအပ်လို့လား။
အောင်မြင်သူတွေရဲ့နောက်မှာ ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာလေး။
အဲ့တာနဲ့ ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့ လက်တွဲဖော် မဖြစ်မနေ လိုအပ်တာလား ဆိုတာလေး လေ့လာမိတယ်။
ဒါ့အပြင် အောင်မြင်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေဟာ လက်တွဲဖော် မထားတာ မရှာတာ ပိုကောင်းတယ် ဆိုတာလေး သွားတွေ့တယ်။
အောက်မှာ အချက်လေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးမယ်။
1. ရည်းစား ထားတာက မလိုအပ်တဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ဖြစ်စေတယ်။
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေရဲ့ လိင်မှုရေးရာအခြေအနေဘယ်လိုရှိမယ်လို့ သင်ထင်သလဲ?
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့သူတို့လည်း ကျွန်တော်တို့လိုလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သိုသိုသိပ်သိပ်ပဲနေချင်ကြတယ်လေ ။
ပြီးတော့ ဇီဝဗေဒပညာရှင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာသူ Alice Dreger ပြောခဲ့တာကတော့
ကိုယ်ချင်းဆက် အမွှာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လောက် လိင်ကိစ္စကိုလိုအပ်မှုမရှိပါဘူးတဲ့ ။
ပြီးတော့ သူတို့မှာ ထာဝရအတူရှိမယ့် ဝိညာဉ်ဖက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားတစ်ယောက်ကိုလည်းမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ ။